Misy kosa ny 2 sitrana afaka nivoaka avy teny amin’ny CHU Anosiala. Mijanona ho 85 no tazonina ary 23 no sitrana tanteraka. Tsy nisy marary misy fahasarotana ny toe-pahasalamany ho an’ireo mbola manohy ny fitsaboana. Lehilahy 57 anankiroa samy avy eto Antananarivo izy ireo, izay eny Befelatanana ny iray ary eny Anosiala ny iray. Samy vokatry ny fifampikasohana kosa no nahavoa azy ireo. Tamin’ny voalohany isika nanao fitiliana faobe ireo olona tonga tamin’ny fiaramanidina ny 11-19 desambra. Nisy ihany koa ireo olona nifanerasera tamin’izy ireo notiliana.
Any anaty fiarahamonina
Ankehitriny, efa andro maro no niparitaka any amin’ny fiarahamanonina ny coronavirus. Izay no nanohizana ny fepetra, ka isan’izany ny fihibohana. Efa nisy rahateo ny tranga izay olona tsy fantatra mazava hoe avy aiza no nahazoany ny coronavirus. Midika io fa tena mbola tsy afa-doza ny firenena na misy aza ny sitrana satria miha tsy voafehy sy sarotra karohina ireo voa noho ny fifampikasohana. Mandeha hatrany ny fikarohana ireo hoe iza no nifampikasoka, ka tonga hatramin’ny fitetezana tokantrano. Misy ihany koa ny olona miahiahy amin’ny toe-pahasalamany ka tonga manantona. Ny zava-dehibe tokony ho tsapan’ny tsirairay dia efa eny amin’ny fiarahamonina ny tsimokaretina, ary tsarovy fa tsy voatery hisy soritr’aretina vao mamindra. Aza misioka isika raha tsy tafavoaka ny ala hoe: misy ny sitrana, fa mbola tsy afa-doza isika, hoy ny fanazavana.